Amerika Avaratra · Jolay, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Jolay, 2013
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Jolay, 2013
Afrika Mainty 21 Jolay 2013
Eoropa Andrefana 12 Jolay 2013
Fitsidihana Faharoa Ataon'i Barack Obama Ao Afrika : Hanatratra an'i Shina ?
Afrika Mainty 05 Jolay 2013
Manantosa fitsidihana any Afrika nanomboka tamin'ny 26 jiona hatramin'ny 3 jolay ny filoha Obama. Ao Afrika atsimo izy amin'izao fotoana izao rehefa avy nitsidika an'i Senegaly. Tanzania indray no firenena manaraka hotsidihany. Ho an'ireo mpaneho hevitra, fanenjehana ny zava-tsy vita ity fitsidihana ity. Miezaka manohitra ny fihazakazan'ny fandrosoan'ny toekarena Shinoa...